China Seamless steel tube စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
အမျိုးအစား- ချောမွေ့သောသံမဏိပြွန် တံဆိပ်များ- 3PE သံမဏိပိုက်များ၊ A106-B၊ A199-T11၊ A283-D၊ A315-B၊ A335-P1၊ A335-P22၊ A53၊ A53-B၊ မော်တော်ကား axle tube၊ အရည် tube, ရေနံမြေသားပြွန်, Pressure vessel tube, Structural tube
ကုသိုလ်ကံ သေးငယ်သော အချင်း ချောမွေ့သော သံမဏိပြွန်/ပိုက်
နိဒါန်း သေးငယ်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပိုက်သည် အဝိုင်း၊ စတုရန်းနှင့် စတုဂံစတီးလ်ဖြစ်ပြီး အခေါင်းပေါက်အပိုင်းရှိပြီး အစွန်းတွင် အဆစ်များမရှိပါ။ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပိုက်များကို သံမဏိအပေါက်များ သို့မဟုတ် သွေးကြောမျှင်ပိုက်များအတွင်းသို့ ဖောက်ထွင်းဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကာ စတီးလ်ပိုက်လုံးများနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ထို့နောက် အပူလှိမ့်ခြင်း၊ အအေးလှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် အအေးပုံဆွဲခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပိုက်များသည် အခေါင်းပေါက်တစ်ခုပါရှိပြီး အရည်များကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် ပိုက်လိုင်းများအဖြစ် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။သံမဏိအဝိုင်းကဲ့သို့သော အစိုင်အခဲစတီးလ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ သံမဏိပိုက်များသည် ကွေးညွှတ်မှုနှင့် တွန်းလှန်အားနှင့် အလေးချိန်ပို၍ တူညီပါသည်။၎င်းတို့သည် သေးငယ်သော အပြင်အချင်းရှိသော ချွေတာသောဖြတ်ပိုင်းစတီးလ်များဖြစ်သည်။ချုပ်ရိုးစတီးပိုက်များကို သေးငယ်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသော ချောမွေ့သောစတီးပိုက်များဟု ခေါ်နိုင်သည်။သေးငယ်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပိုက်များကိုလည်း ခွဲခြားနိုင်သည်- ယေဘုယျအားဖြင့် သံမဏိပိုက်၏ အပြင်ဘက်အချင်းပေါ်ရှိ ချုပ်ရိုးချုပ်သားသေးငယ်သော သံမဏိပိုက်များနှင့် ဖြောင့်စင်းသော ချုပ်ရိုးများ (ဂဟေဆော်သည်ဟုလည်း ခေါ်သည်)၊89 မီလီမီတာအောက်နှင့်4မီလီမီတာအထက်တို့ကို သေးငယ်သောအချင်း ချောမွေ့မှုမရှိသော စတီးပိုက်များဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
နံရံအထူ: 0.5mm-50mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို။
ပြင်ပအချင်း: 4mm-800mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို။
အပေါ်ယံ အနက်ရောင်ပန်းချီ၊ အရောင်တင်ဆီ၊ သံချေးဆန့်ကျင်ဆီ၊ ပူသောသွပ်ရည်စိမ်၊ အအေးသွပ်ရည်၊ 3PE စသည်တို့။
လျှောက်လွှာ 1. သေးငယ်သော ချောမွေ့သော သံမဏိပိုက်များကို စက်မှုစက်ရုံများ၊ အထပ်မြင့် မြို့ပြ အဆောက်အအုံများ၊ စည်ပင်အင်ဂျင်နီယာ၊ ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ တံတားများ၊ မီးရထားယာဉ်များနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။၎င်းတို့၏ ကောင်းမွန်သော ပလတ်စတစ်သား၊ မြင့်မားသော ဖွဲ့စည်းပုံ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ခံနိုင်ရည်အားကောင်းသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ငလျင်လှုပ်ခြင်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ဗိသုကာ အဆောက်အအုံ ကျရောက်မှု များသည်။
2. သေးငယ်သော အချင်း ချောမွေ့သော သံမဏိပိုက်များ သည် မြင့်မားသော ဆန့်နိုင်စွမ်းအားနှင့် ခိုင်မာမှုရှိသည်။၎င်းတို့သည် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများနှင့် တံတားများကဲ့သို့သော သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အအေးခံနိုင်မှု နှင့် ဂဟေဆော်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။အပိုင်းအရွယ်အစားနှင့် မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။အကြီးစားတံတားတည်ဆောက်မှု၊ စက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်ရေး၊ စက်မှုစက်ရုံအစိတ်အပိုင်းများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
3. သေးငယ်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ချောမွေ့မှုမရှိသော သံမဏိပိုက်များကို အဓိကအားဖြင့် သွယ်တန်းသော တာဝါတိုင်များ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လွှဲပြောင်းစခန်း တာဝါတိုင်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ကရိန်းတာဝါတိုင်များ၊ ဓာတ်လှေကား ပံ့ပိုးမှုများ စသည်တို့ ပြုလုပ်ရန် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ တာဝါတိုင်သည် ပုံမှန်အပူချိန်နှင့် နိမ့်သော အပူချိန်တို့ လိုအပ်သည့်အခါ မိုးဒဏ်ခံနိုင်သော သံမဏိကို ရွေးချယ်ရန် စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ အခြေအနေများ
"စျေးကွက်ကိုလေးစားပါ၊ ဓလေ့ထုံးစံကိုလေးစားပါ၊ သိပ္ပံကိုလေးစားပါ" ၏အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ်ဆောင်ရန်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အနာဂတ်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးနှင့် အပြန်အလှန်အောင်မြင်မှုရရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးခံစားခွင့်၏ စီးပွားရေးမူကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်သော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။
နောက်တစ်ခု: အကွက်ဆင် စတီးကွိုင်
Small Diameter Seamless Steel Seamless Tube
Small Diameter Seamless Steel Tube စက်ရုံ
Stainless Steel Seamless Tube စက်ရုံ